Ukuphela kwehlabathi kuya kuba njani ngokwebhayibhile Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuphela komhlaba kuya kuba njani ngokwebhayibhile. Isiphelo sehlabathi siyakuba lixesha intshabalalo nomgwebo, kodwa kunye a Ixesha lethemba kwabo bathanda uYesu. Zininzi iziprofeto eBhayibhileni malunga nokuba isiphelo sehlabathi siya kuba njani, kodwa asizukuyiqonda yonke into ide yenzeke. Ikholwa akufuneki likoyike ukuphela kwehlabathi.
Ngaphambi kokuphela kwehlabathi, izinto ezininzi ziya kwenzeka:
Le yemiqondiso yokuba isiphelo sikufuphi. Emva kwezi ziganeko kuza kuza isiphelo sehlabathi.
1 Ukuphela komhlaba kuya kuba njani ngokwebhayibhile
1.1 1. Ukuza kukaYesu
1.2 2. Idabi lokugqibela
1.3 3. Ukutshatyalaliswa kwehlabathi
1.4 4. Uvuko nomgwebo wokugqibela
1.5 5. Amazulu amatsha nomhlaba omtsha
Omdala kunye ITestamente eNtsha Bathetha ngeziganeko ezithile eziza kwenzeka kwisiphelo sehlabathi:
1. Ukuza kukaYesu
Ekupheleni kwehlabathi, uYesu uya kubuyela zisa isigwebo, misa ubulungisa uthathe abangcwele ubase ezulwini. Ukuza kukaYesu sisiganeko esikhulu sokuba Ngaba iphawula ukuphela kwehlabathi. Ithemba elikhulu lalo lonke ikholwa kukuba asishiywanga; usuku lunye UYesu uza kubuya asise ezulwini.
Uya kubonakala ngelo xesha umqondiso woNyana woMntu ezulwini; zize zonke izizwe zomhlaba zilile, zimbone uNyana woMntu esiza phezu kwamafu ezulu, enamandla, nobuqaqawuli obukhulu.
Kwaye uya kuthuma iingelosi zakhe ngesandi esikhulu sexilongo, kwaye baya kuqokelela ndawonye abanyulwa bakhe bevela emimoyeni yomine, ukusuka kwesinye isiphelo sezulu ukuya kwesinye.
2. Idabi lokugqibela
bonke Iintshaba zikaThixo ziya kumanyana zilwe Naye nabangcwele. Iintshaba ziya kuba zininzi, kodwa UThixo uza kuwoyisa. Iya kuba ngumhla woloyiso olukhulu kubantu bakaThixo.
Ndalibona irhamncwa, ookumkani bomhlaba, nemikhosi yabo, ihlanganiselwe emfazweni, nalowo ulikhweleyo ihashe nomkhosi wakhe.
Laza irhamncwa labanjwa, kunye nalo kwabanjwa umprofeti obuxoki, lowo wayenzayo imiqondiso phambi kwayo, wabalahlekisa ngayo abo balwamkelayo uphawu lwerhamncwa, abo baqubuda kuwo umfanekiselo walo; Aba babini baphoswa bephila edikeni lomlilo elivutha isalfure.
Abaseleyo babulawa ngekrele elaliphuma emlonyeni walowo ukhwele ihashe, zaza zonke iintaka zanelisa kukutya kwazo.
3. Ukutshatyalaliswa kwehlabathi
UThixo uya kutshabalalisa el mundo ngomlilo. Lo iya kuba ngumhla womgwebo nesohlwayo sesono esonakalise umhlaba. Yonke into engafezekanga iya kutshatyalaliswa.
Ke yona imini yeNkosi iya kuza njengesela ebusuku; apho amazulu aya kudlula ngengxolo enkulu, nezi zinto zitshileyo ziya kutshatyalaliswa, nomhlaba nayo yonke imisebenzi ekuwo iya kutshiswa.
Eyesi-2 kaPetros 3: 10
4. Uvuko nomgwebo wokugqibela
Uvuko kunye ityala final
Bonke abafileyo baya kuvuswa, abanye bagwetyelwe, abanye bavuswe ngobomi obungunaphakade. Bonke baya kuziswa phambi koThixo kwaye nabani na ogama lakhe libhalwe kwincwadi yobomi baya ezulwini, kodwa abagwetyelweyo baya kuphoswa edikeni lomlilo, kunye usathana nezithunywa zakhe, ukubandezeleka ngonaphakade.
Kwaye abaninzi kwabo balele eluthulini lomhlaba baya kuvuswa, abanye bavuke kubomi obungunaphakade, kwaye abanye bavuswe kukuhlazeka okungapheliyo nokudideka.
UDaniyeli 12: 2
5. Amazulu amatsha nomhlaba omtsha
Amazulu amatsha nomhlaba omtsha
Ekugqibeleni UThixo uyakubuyisela zonke izinto, adale umhlaba ozele bubukho bakhe, ngaphandle kwesono okanye ukubandezeleka. Bonke abasindisiweyo baya kufumana imizimba emitsha engenakonakala kwaye baya kuhlala ngonaphakade noThixo.
Ndeva izwi elikhulu liphuma emazulwini, lisithi, Yabona, umnquba lo kaThixo unabantu; babe ngabantu bakhe, uThixo ngokwakhe abe nabo enguThixo wabo.
Uya kuzisula uThixo zonke iinyembezi emehlweni abo; kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho nasijwili, nakukhala, nantlungu; ngokuba izinto zokuqala zenzekile.
ISityhilelo 21: 3-4
Zonke ezi ziganeko ziya kwenzeka esiphelweni sehlabathi, kodwa Akukho mntu waziyo ngokuqinisekileyo ukuba kwenzeka nini okanye nini kanye. Le yimfihlakalo eyaziwa nguThixo kuphela. Kodwa uThixo sele elumkisile ukuba ngenye imini kuyakwenzeka, ke kufuneka sizilungiselele. Eyona ndlela yokulungiselela kukuphila ngendlela elungileyo. Asifanele soyike, kuba isiphelo sehlabathi siza kuzisa uvuyo olungunaphakade kwabasindisiweyo.
Siyathemba ke, ngokwezithembiso zakhe, izulu elitsha, nomhlaba omtsha, ahlala kuwo Ubulungisa.
UPetros 3: 13-14
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku lifutshane liyakunceda uqonde isiphelo sehlabathi sizobanjani ngokwebhayibhile. Ukuba unomdla wokuqhubeka nokufunda malunga neengcamango zebhayibhile, sikushiya inqaku elichazayo Zingaphi iindidi zokuzila eziseBhayibhileni?.